“Sambatra ny olona manana an’i Jehovah ho Andriamaniny!” —SAL. 144:15.
HIRA: 111, 109
Inona no azontsika atao mba tsy ho tafahoatra ny fitiavantsika ny tenantsika?
Nahoana ny olona tia vola no tsy tena sambatra?
Inona no hanampy antsika hahalala raha tia fahafinaretana isika na tsia?
1. Nahoana no miavaka izao fotoana iainantsika izao?
TENA miavaka izao fotoana iainantsika izao. Manangona ‘vahoaka be avy amin’ny firenena sy foko sy vahoaka ary fiteny rehetra’ mantsy i Jehovah, araka ny efa voalazan’ny Baiboly. Valo tapitrisa mahery izao io vahoaka be io, ary lasa “firenena mahery” sady sambatra. “Manao fanompoana masina ho [an’Andriamanitra] andro aman’alina” izy ireo. (Apok. 7:9, 15; Isaia 60:22) Mbola tsy be dia be hoatr’izany hatramin’izay ny olona lasa tia an’Andriamanitra sy ny mpiara-belona aminy.
2. Inona no karazana fitiavana mampiavaka ny olona tsy tia an’Andriamanitra? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
2 Milaza koa anefa ny Soratra Masina fa hisy karazana fitiavana hampiavaka an’ireo olona tsy tia an’Andriamanitra. Tsy mahalala afa-tsy ny tenany ny olona manana an’io fitiavana io. Hoy ny apostoly Paoly momba izany: ‘Amin’ny andro farany, dia ho tia tena ny olona, ho tia vola, ho tia fahafinaretana fa tsy ho tia an’Andriamanitra.’ (2 Tim. 3:1-4) Mifanohitra amin’ny fitiavana tokony hananan’ny Kristianina izany. Tsy sambatra araka ny eritreretiny ny olona tsy mitady afa-tsy izay hahasoa ny tenany. Vao mainka lasa “tsy mora setraina” mantsy ny fiainana rehefa tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany ny ankamaroan’ny olona.
3. Inona no hodinihintsika ato, ary nahoana?
3 Fantatr’i Paoly fa hihabetsaka ny olona tsy hieritreritra afa-tsy izay hahasoa ny tenany, ka mety hisy vokany ratsy amin’ny Kristianina izany. Nilaza tamin’izy ireo àry izy hoe “ialao” ny olona hoatr’izany. (2 Tim. 3:5) Tsy ho vitantsika anefa ny tsy hifanerasera mihitsy amin’izy ireny. Inona àry no hanampy antsika tsy hanana ny toe-tsain’ity tontolo ity fa hiezaka hampifaly an’i Jehovah, ilay Andriamanitra fitiavana? Hojerentsika hoe inona no tsy itovizan’ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana resahin’ny 2 Timoty 3:2-4. Hanampy antsika handini-tena izany, ka ho haintsika kokoa ny haneho an’ilay fitiavana tena mahafa-po sy mahasambatra.
ANDRIAMANITRA VE NO TIANAO SA NY TENANAO?
4. Nahoana no tsy ratsy ny hoe tia ny tenantsika?
4 Hoy ny apostoly Paoly: “Ny olona ho tia tena.” Midika ve izany hoe tsy tokony ho tiantsika ny tenantsika? Tsia. Ara-dalàna raha tiantsika ny tenantsika, ary ilaina izany. Efa izany mihitsy no nanaovan’i Jehovah antsika. I Jesosy aza nilaza hoe: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.” (Mar. 12:31) Tsy ho tia ny namantsika isika raha ny tenantsika aza tsy tiantsika. Milaza koa ny Soratra Masina fa tokony ho tia ny vadiny “tahaka ny tenany” ny lehilahy. “Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Fa tsy misy olona mankahala ny nofony, fa mamelona azy io kosa sy maneho fitiavana azy.” (Efes. 5:28, 29) Midika izany fa tokony ho tia ny tenantsika isika, fa araka ny antonony.
5. Hoatran’ny ahoana ny olona tia tena?
5 Ratsy anefa ilay hoe tia tena resahin’ny 2 Timoty 3:2. Tsy araka ny antonony mantsy ilay izy, fa efa lasa tafahoatra. Mieritreritra loatra momba ny tenany ny olona tia tena, izany hoe “mihevi-tena mihoatra noho izay tokony hoheverina.” (Vakio ny Romanina 12:3.) Tsy mahalala afa-tsy ny tenany izy, ka zara raha miraharaha ny hafa. Tsy manaiky ho diso izy rehefa misy zavatra tsy mety, fa manome tsiny ny hafa. Tsy tena sambatra ny olona hoatr’izany.
6. Inona no vokany rehefa tia an’Andriamanitra ny olona iray?
6 Misy manam-pahaizana milaza fa ny hoe tia tena no notononin’i Paoly voalohany, satria izy io no mahatonga an’ireo toetra ratsy hafa noresahiny taorian’izay. Lasa manana toetra tsara kosa ny olona tia an’Andriamanitra, anisan’izany ny fifaliana, fiadanana, fahari-po, hatsaram-panahy, hatsaran-toetra, finoana, fahalemem-panahy, ary fifehezan-tena. (Gal. 5:22, 23) Nilaza ny mpanao salamo fa “sambatra ny olona manana an’i Jehovah ho Andriamaniny!” (Sal. 144:15) Andriamanitra falifaly i Jehovah, ka faly koa ny vahoakany. Mahafinaritra azy ireo koa ny manome mba hanampiana ny hafa. (Asa. 20:35) Tsy mba hoatran’ny olona tia tena sy tsy mieritreritra afa-tsy ny hahazo izy ireo.
Inona no hanampy antsika tsy ho tia tena? (Fehintsoratra 7)
7. Inona no fanontaniana hanampy antsika handinika raha tia an’Andriamanitra isika na tsia?
7 Ahoana no ahalalantsika raha ny tenantsika no lasa tiantsika kokoa noho Andriamanitra? Diniho ity torohevitra ao amin’ny Filipianina 2:3, 4 ity: “Aza manao na inona na inona noho ny fitia te hifanditra na noho ny fireharehana, fa amim-panetren-tena kosa dia aoka samy hanao ny hafa ho ambony noho ny tenany. Ary aoka ny tsirairay aminareo hihevitra izay hahasoa ny hafa, fa tsy izay hahasoa ny tenany ihany.” Eritrereto hoe: ‘Mampihatra an’izany ve aho? Tena miezaka manao izay asain’Andriamanitra ataoko ve aho? Mitady hevitra hanampiana ny mpiara-manompo sy ny olona eny amin’ny faritany ve aho?’ Sarotra indraindray ny hoe manokana fotoana sy hery mba hanampiana olona. Mila ezaka sy fandavan-tena izany. Hahazo sitraka amin’ilay Mpanjakan’izao rehetra izao anefa isika raha manao an’izany. Misy zavatra hafa mahasambatra kokoa noho izany ve?
8. Inona no nataon’ny Kristianina sasany noho izy tia an’Andriamanitra?
8 Nahafoy asa mety hahatonga azy hanankarena ny Kristianina sasany, satria tia an’Andriamanitra ka te hanompo azy bebe kokoa. Anisan’izany i Ericka, dokotera any Etazonia. Naleony nanao mpisava lalana toy izay hifantoka be loatra amin’ny asany dia hahazo toerana ambonimbony kokoa. Lasa afaka nanompo tany amin’ny tany maro niaraka tamin’ny vadiny izy vokatr’izany. Hoy izy: “Lasa nihatsara ny fiainanay, satria be dia be ny zavatra nahafinaritra hitanay rehefa niara-nanompo tamin’ny fiangonana miteny vahiny izahay. Nahazo namana vaovao koa izahay.” Mbola dokotera i Ericka, saingy atokany hanampiana olona hahalala an’i Jehovah sy hanampiana ny mpiara-manompo aminy ny ankamaroan’ny fotoanany sy ny heriny. Hoy izy: “Tena faly sy afa-po aho.”
HARENA ANY AN-DANITRA SA HARENA ETO AN-TANY?
9. Nahoana no tsy sambatra ny olona tia vola?
9 Nilaza i Paoly hoe “ho tia vola” ny olona. Niresaka momba an’Andriamanitra tamin’ny rangahy iray ny mpisava lalana iray any Irlandy, taona maromaro lasa izay. Namoaka vola taratasy ilay rangahy, sady nilaza hoe: “Ity no andriamanitro!” Olona maro no hoatr’izany, na dia tsy miaiky an’izany aza izy ireo. Ny vola sy izay azony vidina amin’ny vola no tiany. Mampitandrina toy izao anefa ny Baiboly: “Izay tia volafotsy dia tsy ho afa-po amin’izay volafotsy ananany. Ary izay tia harena koa tsy ho afa-po amin’izay harena azony.” (Mpito. 5:10) Tsy mety afa-po amin’izay vola azony ny olona tia vola, fa mifofotra mitady vola bebe kokoa foana. Hiafara amin’ny fahoriana anefa izany.—1 Tim. 6:9, 10.
10. Inona no lazain’ny Baiboly momba ny harena sy ny fahantrana?
10 Marina fa mila vola daholo isika. Fiarovana izy io. (Mpito. 7:12) Ahoana anefa raha tsy manana afa-tsy vola hividianana an’izay tena ilaintsika isika? Ho sambatra ve isika? Eny! (Vakio ny Mpitoriteny 5:12.) Nivavaka toy izao i Agora zanakalahin’i Jake: “Aza atao mahantra aho, nefa aza atao manankarena koa. Izay sakafo sahaza ahy no aoka hohaniko.” Azontsika hoe nahoana izy no tsy te ho lasa mahantra faraidiny. Nilaza izy fa tsy te ho lasa mpangalatra ka hanala baraka an’Andriamanitra. Nivavaka koa anefa izy mba tsy ho lasa manankarena. Nahoana? Hoy izy: “Sao ho voky aho ka handa anao ary hilaza hoe: ‘Fa iza moa i Jehovah?’” (Ohab. 30:8, 9) Mitoky amin’ny harenany anefa ny olona sasany, fa tsy amin’Andriamanitra. Mahafantatra olona hoatr’izany angamba ianao.
11. Inona no torohevitra nomen’i Jesosy momba ny vola?
11 Tsy afaka ny hampifaly an’Andriamanitra ny olona tia vola. Hoy mantsy i Jesosy: “Tsy misy mahay manompo tompo roa, fa ny iray ho halany ary ny iray ho tiany, na ny iray hifikirany ary ny iray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny Harena ianareo.” Hoy koa izy talohan’ny nitenenany an’izany: “Aza manangona harena ho anareo intsony etỳ an-tany, izay misy bibikely sy harafesina manimba, ary misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. Manangòna kosa harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy bibikely na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra.”—Mat. 6:19, 20, 24.
12. Nahoana no mora kokoa ny manompo an’i Jehovah raha manana fiainana tsotra isika? Manomeza ohatra.
12 Maro no mahatsapa fa lasa sambatra kokoa izy sady lasa manam-potoana kokoa hanompoana an’i Jehovah, rehefa notsoriny ny fiainany. Nanana trano be sy orinasa i Jack, any Etazonia. Namidiny anefa ilay izy mba ho afaka hanao mpisava lalana miaraka amin’ny vadiny izy. Hoy izy: “Tsy mora ny nandao an’ilay tranonay tsara tarehy sy ny fanananay tany ambanivohitra.” Nisy olana foana tany am-piasany talohan’izay, dia sorena izy isaky ny nody. Hoatr’izany foana nandritra ny taona maro. Hoy i Jack: “Ny vadiko anefa falifaly foana. Mpisava lalana mantsy izy. Nilaza tamiko izy hoe: ‘Tsy misy hoatran’ny sefoko kosa aloha e!’ Iray ihany anefa izao ny sefonay roa, dia i Jehovah, satria efa mpisava lalana koa aho.”
Inona no hanampy antsika tsy ho tia vola? (Fehintsoratra 13)
13. Inona no hanampy anao hahita hoe ahoana no fiheveranao ny vola?
13 Eritrereto ireto fanontaniana ireto mba hahitanao hoe ahoana no fiheveranao ny vola: ‘Hita eo amin’ny fiainako ve fa mino izay lazain’ny Baiboly momba ny vola aho? Izay hahazoana vola ve no zava-dehibe indrindra amiko? Ny fananana ve no zava-dehibe kokoa amiko noho ny fifandraisako amin’i Jehovah sy ny olona? Tena matoky ve aho fa hanome izay ilaiko i Jehovah?’ Afaka matoky isika fa tsy mba handiso fanantenana an’izay matoky azy izy.—Mat. 6:33.
TIA AN’I JEHOVAH SA TIA FAHAFINARETANA?
14. Ahoana no tokony hiheverana ny fahafinaretana?
14 Be dia be izao ny olona “tia fahafinaretana”, araka ny efa nolazain’ny Baiboly. Hitantsika teo fa tsy misy maharatsy ny hoe tia ny tenantsika sy ny hoe mitady vola, raha mahay mandanjalanja isika. Hoatr’izany koa ny fahafinaretana. Tsy tian’i Jehovah hampijaly tena be isika na hoe tsy hifalifaly mihitsy. Ny Baiboly aza mampirisika ny mpanompon’Andriamanitra hoe: “Mandehana, hano amim-pifaliana ny sakafonao, ary sotroy amin’ny fo falifaly ny divainao.”—Mpito. 9:7.
15. Inona no dikan’ilay hoe “tia fahafinaretana”?
15 Milaza ny 2 Timoty 3:4 hoe ho tia fahafinaretana ny olona fa tsy ho tia an’Andriamanitra. Tsy milaza ilay andininy hoe ny fahafinaretana no ho tian’ny olona kokoa noho Andriamanitra. Tsy azo lazaina àry hoe mbola hisy fitiavana an’Andriamanitra kely ihany ao amin’ny olona. Voalaza ao kosa hoe “tsy ho tia an’Andriamanitra” izy ireo. Hoy ny manam-pahaizana iray: “Tsy milaza mihitsy [io andininy io] hoe mba tia an’Andriamanitra ihany ny olona. Midika kosa izy io hoe tena tsy tia azy mihitsy izy ireo.” Tokony hampieritreritra an’ireo tia fahafinaretana izany. Milaza ny Baiboly fa “voavilin’ny” fahafinaretana eo amin’ny fiainana ny olona “tia fahafinaretana.”—Lioka 8:14.
16, 17. Inona no modely navelan’i Jesosy?
16 Tena nahay nandanjalanja i Jesosy rehefa nanao zavatra nahafinaritra azy. Nanatrika “fampakaram-bady” sy “fanasambe” izy. (Jaona 2:1-10; Lioka 5:29) Nanova rano ho lasa divay izy rehefa lany ny divay tany amin’ilay fampakaram-bady. Rehefa nisy olona nanakiana azy koa, indray mandeha, noho izy nihinana sy nisotro, dia nohazavainy tsara hoe tsy nahay nandanjalanja ry zareo fa niseho ho marina loatra.—Lioka 7:33-36.
17 Tsy variana nanao izay nahafinaritra azy anefa i Jesosy. I Jehovah no zava-dehibe indrindra taminy, ary nanao izay rehetra azony natao izy mba hanampiana ny olona. Nanaiky hijaly sy ho faty teo amin’ny hazo fijaliana izy mba hamonjena olona maro. Izao no nolazainy tamin’izay te hanara-dia azy: “Sambatra ianareo raha tevatevain’ny olona sy enjehiny ary amoronany lainga ka lazainy fa nanao izao zava-dratsy rehetra izao, noho ny amiko. Mifalia sy miravoravoa fatratra, satria lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Fa toy izany no nanenjehany ny mpaminany talohanareo.”—Mat. 5:11, 12.
Inona no hanampy antsika tsy ho tia fahafinaretana? (Fehintsoratra 18)
18. Inona avy ny fanontaniana hanampy antsika hamantatra raha tia fahafinaretana tafahoatra isika na tsia?
18 Ahoana no ahalalantsika hoe tia fahafinaretana tafahoatra isika na tsia? Eritrereto izao: ‘Ny fialam-boly ve no zava-dehibe kokoa amiko noho ny fivoriana sy ny fanompoana? Vonona hamela ny zavatra mahafinaritra ahy ve aho mba hahafahako manompo an’i Jehovah? Mieritreritra an’i Jehovah ve aho rehefa hifidy fialam-boly?’ Raha tena tia an’i Jehovah isika, dia tsy ny zavatra efa fantatsika hoe tsy tiany ihany no tsy hataontsika, fa ny zavatra atahorantsika koa hoe tsy ho tiany.—Vakio ny Matio 22:37, 38.
INONA NO MAHASAMBATRA?
19. Ny olona hoatran’ny ahoana no tsy ho sambatra mihitsy?
19 Efa 6 000 taona teo ho eo izay ny tontolon’i Satana no nampijaly ny olona, ary kely sisa dia hifarana izy io. Be dia be ny olona tia tena, tia vola, ary tia fahafinaretana. Izay hahazoany tombony no masaka ao an-tsainy, ary izay hanatanterahana ny faniriany no zava-dehibe indrindra aminy. Tsy tena ho sambatra mihitsy ny olona hoatr’izany. Hoy kosa ny Baiboly: “Sambatra izay manana an’Andriamanitr’i Jakoba ho mpanampy azy sady manantena an’i Jehovah Andriamaniny.”—Sal. 146:5.
20. Sambatra ve ianao noho ianao tia an’i Jehovah? Hazavao.
20 Vao mainka tia an’i Jehovah isika mpanompony, ary mihamitombo ny isantsika isan-taona. Porofo izany hoe efa manjaka ny Fanjakan’Andriamanitra, ary kely sisa izy io dia hitondra fitahiana ho an’ny tany. Tsy ho azontsika sary an-tsaina mihitsy izany fitahiana izany. Rehefa manao ny sitrapon’Andriamanitra ihany isika vao tena ho faly, satria fantatsika hoe mampifaly an’ilay Tompo Fara Tampony isika amin’izany. Ho sambatra mandrakizay izay tia an’i Jehovah. Ho hitantsika ao amin’ny lahatsoratra manaraka ny toetra ratsy lasa ananan’ny olona rehefa tia tena izy. Ho hitantsika koa fa tsy hoatr’izany ny mpanompon’i Jehovah.